love « whyouth
तिमि बाहेक कोहि छैन,
तर तिमि पनि छैनौँ,
तिम्लाई मात्र हेर्छु भनेको,
तर तिमि देखिदैनौं !
तिम्रो स्पर्स जस्तो
कुनै कुराले छुदैन,
धेरै धेरै मान्छे तर,
तिमि जस्तो कोहि हुदैन ।
मलाई यो कुराहरु,
भन्नु पनि छैन,
किनकि तिमि यति गजब छौ,
तिम्रो बारेमा लेख्दा प्रत्येक शब्द,
आफैं माताल हुन्छ,
किनभने तिमि र अरुहरु,
जब हिसाब गर्छु म,
आकाश पाताल हुन्छ।
महिनौ दिनसम्म हामी
झगडा गर्थेम दिन रात,
अहिले शान्ति छ,
आदम्खोरलाई मान्छेले जस्तै,
अप्राप्यको अनुभूति दिएर सौगात,
आहत/ मर्माहत त होइन म,
आकुल, ब्याकुल अलिअलि,
अलिकति अफसोच, अलिकति बिस्मात ।
नचाहेको होइन, नखोजेको होइन,
नभेटेको, नपाएको पनि होइन,
तर तिमि जस्तो कोहि छैन,
तर तिमि पनि छैन !
4 Comments Posted in Literature Tagged break up, cheez, emotions, love, missing, nepali poems